Rose of Sharon: ဖေဖေ(သို့မဟုတ်)ကျမရဲ့HERO
Posted by rose of sharon at 9:10 AM
PAUK July 26, 2009 at 11:54 AM
ကျနော်ကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆုံနိုင်တော့ဘူး..
အဖေ မရှိတာ ..ကြာပြီ..
သားကြီး July 26, 2009 at 12:03 PM
တစ်ခု တင်ထားတာတွေ့ရတော့ အဖေချစ်တဲ့ကျနော်လည်း
ထပ်တူညီမျှတဲ့တန်ပြန်သက်ရောက်မှုမရခဲ့ရင်လည်း အဖေဆိုတာက သားသမီးတွေကို ခွင့်လွှတ်တတ်ခဲ့မြဲပါ။
ကျနော်ကရင်စာသင်ဖူးသေးတယ်ခင်ဗျ ဒါပေမယ့် ခုမေ့ကုန်ပြီ ဟီးးးးး တလုံးစ နှစ်လုံးစပဲ သိတော့တယ်
rose of sharon July 26, 2009 at 12:06 PM
PAUK>ပထမဆုံးcommentလာပေးသွားတာကျေးဇူးနော်... အဖေ့ကိုဘယ်လောက်လွမ်းနေမယ်ဆိုတာကိုယ်ချင်းစာနားလည်မိပါတယ် :(
အနော် July 26, 2009 at 12:13 PM
အမရေ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပီး အဖေ့ကို လွမ်းသွားပီ
အမေ့ကိုပဲ လွမ်းတယ် အမေ့ကို သတိရတယ်လို့ ဖုန်းဆက်တိုင်းပြောတိုင်း
အဖေက နောက်ကနေ ကျန်းမာအောင်နေလို့ပြောတယ် အမရယ်
အဖေနဲ့ စကားပြောခွင့်ရရင်လဲ ကျန်တာတွေ နောက်မှမေးပါ သမီးငယ်ရယ်
နေကောင်းရဲ့လား ကျောင်းစာရော လိုက်နိုင်ရဲ့လားနဲ့ အမြဲမေးတယ်
အဖေ့ရဲ့ လက်ဖောင်းဖောင်းတုတ်တုတ်ကြီးတွေကို သတိရတယ်
အနော် အိမ်ပြန်နောက်ကျတိုင်း လမ်းထိပ်မှာ စောင့်နေတတ်တဲ့ အဖေ့ကို အခုမှ ပိုပီး သတိရနေမိတယ် :((
rose of sharon July 26, 2009 at 12:40 PM
သားကြီးရေ ဟုတ်တယ် အဖေတိုင်းကသားသမီးတွေရဲ့HEROပါ... ကရင်စကားသင်ဖူးတယ်ဆိုတော့တချို့တော့မှတ်မိအုန်းမှာပေါ့နော်...
အနော်ရေ...အဖေ့ကိုလွမ်းအောင်လုပ်မိသွားတယ်... ဒို့လဲသူများတွေအဖေအကြောင်းရေးရင်ကိုယ့်အဖေကိုပိုလွမ်းမိတတ်တယ် အတူတူလွမ်းကြမယ်နော်....
လသာည July 26, 2009 at 1:00 PM
အခုရက်အတွင်း ပင်ပန်းနေမူတွေများတော့ ငိုချင်စိတ်ဝင်ဝင်လာတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တိုင်း အားပေးစကားအမြဲပြောတတ်တဲ့ ဖေဖေကိုပိုလွမ်းမိတယ်။ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး အစ်မroseနဲ့ အတူတူ ပိုလွမ်းသွားတယ်။ ဒီဇင်ဘာခရီးလေးကို အဆင်ပြေပြေ စီစဉ်နိုင်ပါစေ။ မိသားစုအားလုံး ကြည်နူးပြုံးပျော်စွာ ပြန်ဆုံစည်းနိုင်ပါစေလို့ ကူဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ ခင်တဲ့ လသာည
kyalkalay July 26, 2009 at 1:19 PM
အဖေနဲ့ အတူမနေဘူးတာဘဝရဲ့ သုံးချိုးတချိုးမက ဘူးထင်တယ်
သွန်သင်ဆုံးမတာတော်တဲ့ အဖေ ရှိတယ်
အမအဖေနဲ့အမတွေ.ရင်ကျနော်. အတွက်ပါပိုပျော်လိုက် :)
rose of sharon July 26, 2009 at 1:21 PM
Thanks လသာည မအားတဲ့ကြားကလာလည်ပြီး ကော်မန့်ရေးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်.... ခံစားချက်ကိုနားလည်ပါတယ်... အဖေဟာသားသမီးအတွက်... အားကိုးရာ ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးလဲဖြစ်သေးတယ်...
rose of sharon July 26, 2009 at 1:24 PM
ကျေးဇူး ကြယ်ကလေး ပိုပျော်ပေးခဲ့မယ်နော်... :)
Angel Shaper July 26, 2009 at 1:32 PM
မရှာရွန်းရေ........ အဖေကိုချစ်တဲ့ မရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးကို လေးစားချစ်ခင်မိပါတယ်။ အဖေတိုင်းဟာ သားသမီးတွေရဲ့ Hero ကြီး ဖြစ်သလို၊ သမီးရဲ့ Hero ကြီးဟာလဲ အဖေပါပဲ။ ချစ်တဲ့ Hero ကြီးဆီကို ချစ်တဲ့ ဘုရားရဲ့လက်ဆောင်နှစ်ပါးနဲ့ အမြန်ဆုံးသွားတွေ့နိုင်ပါစေလို့ ။ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ အဖေကိုချစ်တဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ ခံစားချက်လေးတွေဒီစာမျက်နှာမှာ မြင်ရလို့ ကြည်နူးမိပါတယ်။ အဖေများအားလုံး ချမ်းမြေ့ပါစေ။
Shinlay July 26, 2009 at 2:00 PM
Rose ရေ..ကျမ အဖေကတော့ ကျမ နဲ့ အတူတူ မရှိခဲ့ ဘူး။
ကျမသိတတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်တော့ သူက မိသားစု အသစ်ဆီမှာ...
တာဝန်ကျေတဲ့ အဖေတွေ အကြောင်းဖတ်တိုင်း မေးခွန်းတွေအများကြီး
မေးမိတယ်။ ကျမ အဖေနဲ့ တွေ့ ခွင့်မရတာကြာခဲ့ပြီ။
ကိုလူထွေး July 26, 2009 at 5:27 PM
အဖေ့အိမ်ကို ပြန်မယ့် အဖေကိုချစ်တဲံ သမီးဆိုး
အစစအရာရာ အဆင်ပြေ အောင်မြင်ပြီး
လိုရာခရီးကို ချောချောမောမော ရောက်နိုင်ပါစေဗျာ...
rose of sharon July 26, 2009 at 7:14 PM
Angel Shaper,ရှင်လေး,ကိုလူထွေး commentရေးသွားတာ၊ လာလည်သွားတာ၊ ဆုတွေတောင်းပေးသွားတာတွေအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်... :)
လင်းကြယ်ဖြူ July 26, 2009 at 7:31 PM
အခုလို မိဘမေတ္တာကို နားလည်သိတတ်တဲ့အတ္ဂက် ...ဘုရားက အနားမှာ အမြဲရှိနေ ကောင်းချီးပေးနေမှာပါ...
ပြီးတော့ ပျော်စရာ မိသားစု ကမ္ဘာလေးထဲမှာ ကျန်းမာရွှင်လန်း အပြုံးပန်းတ္ဂေ ဝေေ၀ဆာဆာ ပ္ဂင့်ဖူးနိုင်ပါစေလို့...
Anonymous July 26, 2009 at 9:20 PM
ဖေဖေ့ကို ပိုလွမ်းသွားတယ် အစ်မရယ်.......
ညီမရဲ့ Hero ဟာလည်း ဖေဖေပါ
သမီးကို အချစ်ပိုတဲ့ ဖေဖေ့ ကို နေ့တိုင်း လွမ်းနေတယ်........
ဒီနှစ်တော့ မပြန်နိုင်သေးလို့ ရှေ့နှစ်မှပဲ တွေ့ရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့
အစ်မအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဒီဇင်ဘာလေး ဖြစ်ပါစေလို့နော်..
ညီမလည်း အစ်မလိုပဲ မြည်းကြည့်ခဲ့တယ်.....ဖေ့ဆီကး)
rose of sharon July 26, 2009 at 10:21 PM
Anonymous>လာလည်သွားတာကျေးဇူး၊ ညီမမြည်းတာဘာလဲဟင် (ဝါသနာပါလို့ပါ)
Anonymous July 26, 2009 at 10:50 PM
ရေတမာ July 27, 2009 at 7:10 AM
မဆိုးတော့တဲ့ မကြီးနဲ့ ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့ ဦးဦးတို့ အပျော်ရွင်ဆုံး မြန်မြန်ဆုံးတွေ့နိုင်ပါစေ..
rose of sharon July 27, 2009 at 7:52 AM
ဆိုင်းရေ... လာလည်သွားတာရော.. comment အတွက်ရော ကျေးဇူး..
ရေတမာ>ဆုတောင်းပေးတာကျေးဇူး... လာလည်သွားတာကျေးဇူး :)
ယွန်းလေး July 27, 2009 at 1:11 PM
မရေးးးးးးးး....မရဲ့ စာကိုဖတ်ပြီးတော့ အဖေ့ကိုတောင်
့yanmyo July 27, 2009 at 1:37 PM
rose of sharon July 27, 2009 at 2:55 PM
poe poe July 27, 2009 at 3:29 PM
်မိုးရွာနေတဲ့အချိန် ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး ဖေဖေ့ကိုသတိယပြီး မျက်ရည်တောင်ကျမိတယ် မိဘတွေနဲ့ဒီဇင်ဘာမှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ နိုင်ပါစေ
jr.လွင်ဦး July 27, 2009 at 5:30 PM
အစ်မရဲ့ တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ။ အစ်မ ဘလော့ကို ခုမှရောက်ဖူးတာ။ စာတွေဖတ်သွားတယ်။ အမ အဖေကျန်းမာပါစေ။
rose of sharon July 27, 2009 at 8:45 PM
မေလေး July 27, 2009 at 10:47 PM
မမ မမဖေဖေနဲ့ ဒီဇင်ဘာမှာပြန်ဆုံပါစေနော်။
မေလေးလဲ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီက အိမ်ပြန်တုန်းက ပါးပါးနဲ့မားမားကို ကြည့်ရတာ ရင်ထဲမကောင်းဘူး။ ပိုပြီးအိုစာသွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။
ငွေလွှဲတိုင်း သမီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြောတတ်တဲ့ မိဘတွေကို သနားမိတယ်။ ငါ့သမီးကျေးဇူးရှိတယ် ပြောရင် တသက်လုံးလူတစ်လုံး သူတစ်လုံးဖြစ်လာအောင် ပြုစုလာတဲ့ ကျေးဇူးတွေကို အမှတ်ပိုရမိတယ် မမရယ်။
မီယာ July 28, 2009 at 3:33 AM
ဒီဇင်ဘာမှာ မိသားတစုလုံး ပြန်ဆုံနိုင်ပါစေနော်
rose of sharon July 28, 2009 at 9:22 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မီယား)
မိုးစက်အိမ် July 28, 2009 at 3:05 PM
အမရေ ဒီပို.စ်လေးဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ
ဘယ်လိုသော အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါစေဗျာ
အဖေကိုချစ်တဲ. သမီးတစ်ယောက်ရဲ. ဆန္ဒတွေ
တွေ.ဆုံနိုင်ပါစေလို. ဆုတောင်းပေးပါတယ် မကြီးရေ...
rose of sharon July 28, 2009 at 4:13 PM
sonata-cantata July 28, 2009 at 9:37 PM
ဒီမှာတော့ ဖေဖေ အကြောင်းက စာရေးမချနိုင်တဲ့ အကြောင်း...ပါလို့ ဒီပို့စ်မှာ ကော်မန့်လေး တကြောင်း ရေးခဲ့ပါရစေနော်
rose of sharon July 28, 2009 at 9:49 PM
မေသစ္စာမောင် July 29, 2009 at 7:06 AM
အမရေ မိသားစုအပေါ် တာဝန်ကျေတဲ့ ဖခင်ကောင်းတွေအများကြီးပါနော်။
အမရဲ့ ဖေဖေလိုပါပဲ ညီမဖေဖေဆိုလည်း အလုပ်ဆင်းလို့အိမ်ပြန်လာရင်တောင်မနားဘဲနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောရဲအောင်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာတွေ ပြန်သတိရမိတယ်။
ဒီဇင်ဘာမှာ ပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်လိုက်ပါ အမရေ...။ အမ ဖေဖေ အမတို့မိသားစုလေးကိုတွေ့ခြင်နေမှာပါ..။ အဖေဆိုတာကတော့ အမေတွေလို သားသမီးတွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိစေမယ့် အပြောအဆို အနေအထိုင်မျိုး မပြောတတ် မလုပ်တတ်ကြပေမယ့် သားသမီးတွေကို ချစ်တာခြင်းတော့ အတူတူပဲလို့ ယုံကြည်မိပါတယ် အမရေ..။
ဖေဖေတွေက silence loverတွေပေါ့နော်
rose of sharon July 29, 2009 at 8:04 AM
ခြေလှမ်းသစ် July 29, 2009 at 9:24 AM
အမရေ လေးစားပါတယ် အဖေကို အရမ်းချစ်တတ်လို့ အဖေနဲ့ အမြန်ပြန်တွေ့နိုင်ပါစေလို့.. ဆုတောင်းရင်း..
စည်သူ July 29, 2009 at 11:58 AM
ဒီဇင်ဘာ ပြန်ဆုံမှာပါ အမရေ စိတ်သာချ..။
rose of sharon July 29, 2009 at 2:20 PM
rose of sharon July 30, 2009 at 11:28 AM
ကောင်းကင်ပြာ July 31, 2009 at 9:42 AM
တို့လဲ သမီးဆိုးတယောက်ထဲ ပါနေတယ်၊ မျက်ရည်လည်စွာ ဖတ်သွားမိတယ်၊ ဒီဇင်ဘာမှာပြန်နိုင်ပါစေနော်၊ တို့လဲ ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊
rose of sharon August 1, 2009 at 8:06 AM
ကောင်းကင်ပြာရေ...ဒို့ပြန်ဖြစ်ဖို့က၉၉%သေချာနေပြီ... လာလည်တာ၊ဆုတောင်းပေးတာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်...း)
သက်ဝေ August 6, 2009 at 12:38 PM
ခုတလော ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အိမ်အလွမ်းတွေနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ထိခိုက်နေတာ ဒီပိုစ့်လေးဖတ်လိုက်တော့ ဝမ်းနည်းတာရယ်... ကြည်နူးတာရယ် ပေါင်းပြီး မျက်ရည်ကျလုလု ဖြစ်သွားတယ်...
စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖေဖေ့ဆီ အမြန်ဆုံး ပြန်နိုင်ပါစေ...
rose of sharon August 6, 2009 at 8:36 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သက်ဝေ လာလည်သွားတဲ့အတွက်ရော ကော်မန့်ရေးသွားတာရော ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်....